Ngathi-henzhen Locksmithobd Technology Co., Ltd.
Inkampani yaseLockmatthobd yinkampani yaseShenzhen, ebhaliswe eTshayina kwaye i-adrees ikwisithili saseShenzhen Longhua, iLong Hua Road, iTianhui Building, C-512. Siyinkampani yase China egxile ekunikezelweni kwezitshixo zezithuthi kunye nezixhobo zokutshixa .singabameli beLISHI, GOSO, HONEST, KLOM.HUK. Singabasasazi behlabathi jikelele bobabini abachanekileyo kunye nabasemva kwemakethi yezithuthi kunye nezitshixo zeTransponder.
Kudala sibonelela ngezitshixo zezithuthi kurhwebo lweemoto kunye nabakhi bezitshixo kwiminyaka emi-5 edlulileyo kwaye ngokwenza njalo sakhe ubudlelwane obuhle kunye nabavelisi, abathengisi abathengisa abanye kunye nabanye abasasazi ukuze ufumane elona xabiso libalaseleyo kwizitshixo zakho. mveliso eZhejiang. Abathengi bamkelekile uku-odola kwiwebhusayithi yethu kodwa nceda ufune iingcebiso zobungcali ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo malunga nokuhambelana kwenxalenye.
Ubhaliso:Ayisiyomfuneko ukubhalisa kwiwebhusayithi yethu kodwa umthengi oshishino kufuneka abhalise ukuze azuze kumaxabiso ethu apheleleyo. Abathengi bamashishini banokubhalisa apha - http://www.locksmithobd.com/my-account/
Intlawulo:Siyayamkela intlawulo kwi-GBP, i-EUR kunye ne-USD. Samkela iVisa, iMatercard kunye nemanyano yasentshona, ukudluliselwa kwebhanki yeT / T. Siyayamkela intlawulo ngogqithiso lwebhanki yamanye amazwe okanye ngePayPal (imirhumo isenokusebenza). Ungalibali ukuhlawula umrhumo wepapa nceda.
Ukuhanjiswa:Sinikezela ngemigangatho kunye nokubonisa iindlela zonikezelo kwihlabathi liphela. Sisebenzisa ezi nkampani zekhuriya ukuhambisa iodolo yakho: China Post, DHL, TNT kunye neFedEx. Iimveliso ziya kufikelela uninzi lwamazwe kwisithuba seentsuku ezisi-7 ukuya kwezi-14.
Ukubuyisa:Abathengi banokubuyisa iimveliso ezintsha nezingasetyenziswanga ukubuyiselwa imali (ngaphandle kwezinto ezizodwa) kwiintsuku ezisi-7. Asinakho ukwamkela imbuyekezo kwizitshixo ezisikiweyo zekhowudi okanye zisikwe kwinombolo yesisu njengoko ezi mveliso zenziwe ukuba ziodolwe. Iimveliso eziphosakeleyo zinokubuyiselwa ekubuyiselweni kwemali kodwa asizukubuyisa nayiphi na imveliso engasebenziyo ngenxa yokuba uyaphule.